Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Hindiya waxay shaaca ka qaadday Kobaca Sare ee Qeybta Drone
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Hindiya • News • Dalxiiska
Drones -ka Hindiya
Tallaabo kale oo loo qaaday xaqiijinta aragtida wadajirka ah ee Aatmanirbhar Bharat, Dowladda Dhexe ee uu hoggaamiyo Raiisul Wasaaraha Hindiya Shri Narendra Modi, ayaa sii daayay khariidadda hawada Hindiya ee hawlgallada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Dib-u-habaynta siyaasadda hawada sare ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa kicin doonta koritaanka caadiga ah ee qaybta soo socota ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Hindiya.
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay siiyaan faa'iidooyin aad u badan dhammaan qaybaha dhaqaalaha.
Marka la eego awoodeedii dhaqameed ee hal -abuurnimada, teknolojiyadda macluumaadka, injineernimada wax -ku -oolka ah iyo baahida weyn ee gudaha, Hindiya waxay awood u leedahay inay noqoto xarun caalami ah oo aan duuliyaha lahayn marka la gaaro 2030.
Khariidadda hawada sare ee drone-ka ayaa imaanaysa iyadoo la raacayo Xeerarka Drone-ka ee la sii daayay, 2021 oo ay sii deysay Dowladda Dhexe 25-kii Ogosto, 2021, qorshaha PLI ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee la sii daayay Sebtember 15, 2021, iyo Tilmaamaha Xogta Geospatial ee la soo saaray Febraayo 15, 2021. Dhammaan dib-u-habayntan siyaasadda waxay kicin doontaa koritaanka caadiga ah ee qaybta soo socota ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
WAA MAXAY DRONES MUHIIM?
Drones -ku waxay bixiyaan faa'iidooyin aad u weyn ku dhowaad dhammaan qaybaha dhaqaalaha. Kuwaas waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn beeraha, macdanta, kaabayaasha dhaqaalaha, dabagalka, gurmadka deg-degga ah, gaadiidka, khariidaynta juqraafiga, difaaca, iyo fulinta sharciga si aan u xuso dhawr. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay noqon karaan abuurayaal shaqo iyo koboc dhaqaale oo muhiim u ah gaaritaankooda, wax -qabadkooda, iyo fududeynta adeegsiga, gaar ahaan meelaha fog fog ee Hindiya oo aan la heli karin.
WAA MAXAY SAAMAYNTA UGU DHAWRAN EE HAL -ABUURAYAASHAAN DRONE?
Waad ku mahadsan tahay xeerarka cusub, qorshaha drone -ka PLI iyo khariidadaha hawada hawada ee si xor ah loo heli karo, warshadaha wax -soo -saarka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa arki kara maalgelin ka badan INR 5,000 crore saddexda sano ee soo socota. Wareejinta iibka sanadlaha ah ee warshadaha waxsoosaarka drone-ka ayaa laga yaabaa inay ka koraan INR 60 crore inta u dhaxaysa 2020-21 ilaa in ka badan INR 900 crore FY 2023-24. Warshadaha wax -soo -saarka ee drone -ka ayaa la filayaa inay soo saaraan in ka badan 10,000 shaqooyin toos ah saddexda sano ee soo socota.
Warshadaha adeegyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, oo ay ku jiraan hawlgallada, khariidaynta, dabagalka, ku-buufinta beeraha, saadka, falanqaynta xogta, iyo horumarinta softiweerka, si loo magacaabo qaar, waxay u kori doontaa heer aad u weyn. Waxaa la rajaynayaa inay koraan ilaa INR 30,000 crore saddexda sano ee soo socota. Warshadaha adeegyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa la filayaa inay soo saaraan shaqooyin ka badan 500,000 saddex sano gudahood.
Khariidadda hawada ee hawlgallada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa laga heli karaa Madal samada dhijitaalka ah ee DGCA.